Tsipy kanetibe: niofana ny mpitsara 22 | NewsMada
Tsipy kanetibe: niofana ny mpitsara 22
Niatrika fiofanana fanamafisam-pahaizana ireo mpitsara eo anivon’ny taranja tsipy kanetibe. 22 mianadahy ireo niatrika izany ka vaovao ny 12 amin’izany, vao avy nahavita fanadinana, tamin’ny taona 2016. Notanterahina, ny zoma lasa teo, tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina izany, notarihin-dry zareo avy eo anivon’ny komision’ny mpitsara (CCA).
Nifantoka tamin’ny fampiharana ny lalàna ao anaty fitsipika anaty ny fampianarana. Tokony hiainga amin’izany avokoa mantsy ny zavatra rehetra, ao anatin’ny lalao iray. Nezahina ihany koa nampitoviana ny lentan’ireo mpitsara tranainy sy ny an’ireo vaovao mba hitovian’ny fomba fijery rehefa mitantana fihaonana.
Marihina fa hampiatra ny zavatra norantoviny, nandritra ity fiofanana ity, ireo mpitsara vaovao ka hanaovany izany ny lalao «open». Tsy maintsy atrehin’ireo mpitsara efa tranainy sy za-draharaha kosa anefa izy ireo amin’izany.
Nomarihin’ireo tomponandraikitra fa tsy mbola ampy ny mpitsara ny tsipy kanetibe eto Madagasikara, izay hanaovana fanentanana ho an’ireo izay liana amin’izany.